Huawei MatePad Pro wuxuu yimid Shiinaha si uu isugu dayo inuu ku garaaco iPad-ka | Androidsis
Huawei waa mid ka mid ah noocyadaas oo sii wadaya inay sharad ku yeeshaan kiniiniyada. Oo waxay ku tusaysaa iyadoo MatePad Pro ayaa lagu bilaabay Shiinaha si wax looga qabto iPad-ka Apple. Si kale haddii loo dhigo, hadda kaliya isticmaaleyaasha ka socda waddankaas ayaa noqon doona kuwa ku raaxeysan kara kiniinkan cusub.
Go'aanka waxaa lagu gaadhay meeleyn ah nooca dalkaaga oo arag suurtogalnimada in lala wareego saamiga suuqa Apple ee qaybta kiniinka. Qalab laga fiirsado qalabkiisa iyo sidoo kale qiimahiisa.
Markii aan ka hadlayno MatePad Pro, waxaan ka faalooneynaa inay leedahay Kirin 990 chip, 6GB / 8GB RAM, shaashad gaadheysa 10,8 inji oo leh xallinta 2560 x 1600, illaa 512GB oo xusuusta gudaha ah, 13MP kamarad gadaal leh f / 1.8 aperture iyo batari dhan 7.250mAh oo si dhakhso leh u socda.
Waa in la ogaadaa in moodeelkan Huawei uu leeyahay 90% saamiga shaashadda-jirka oo leh wax yar oo dhaldhalaal ah oo leh 4,9 mm oo sameeya qaabkii kaniini ahaa. Kaas oo ina keenaya qalab aan culeyskiisu badneyn haddii aan isbarbar dhigno mid ka mid ah heerkiisa. Waxaan ka hadleynaa 460 garaam iyo dhumuc dhan 7,2mm qaybta ugu khafiifsan. Iyo inay leedahay 4 sameecadood iyo baytari awood weyn leh.
Huawei ayaa lagu qasbay inuu meel dhigo kamaradda hore ee daloolka shaashadda ku yaal bidixda kore. Sida walxaha ikhtiyaariga ah, isticmaaluhu wuxuu dooran karaa daboolka kumbuyuutarka iyo waxa noqon lahaa Stylus. Waana halka ay shirkadda Huawei ka soo guurisay Apple si ay ugu soo dallacdo M-qalinkiisa si isku mid ah iyada oo si magnet ah ugu sii haysa cidhifka kiniinka.
Una kiniin leh lacag la'aan wireless Taasina waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ka qaadatid aalado kale, iyo sidoo kale Android 10 oo leh lakabka EMUI ee u gaarka ah shirkadda Huawei. Iyo inay tahay kiniin lagu soo saaray suuqa Shiinaha, maadaama aysan dan ka lahayn in Google wali yahay ma cadeyn karo mid ka mid ah qalabkaaga.
La Huawei MatePad Pro waxaa lagu qiimeeyaa qiyaastii $ 469 qaabka caadiga ah, halka ay ku baxeyso $ 853 marka aan horay u sii socono 8GB ee RAM, 512GB oo ah keyd gudaha ah iyo LTE.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei » Huawei wuxuu Shiinaha ka bilaabayaa MatePad Pro si uu ula tartamo iPad-ka